Somaliland oo laga saaray Shir dhawaan Somalia loogu qaban doono magaalada... - Caasimada Online
Home Warar Somaliland oo laga saaray Shir dhawaan Somalia loogu qaban doono magaalada…
Somaliland oo laga saaray Shir dhawaan Somalia loogu qaban doono magaalada…
Hargeysa (Caasimada Online) –War goordhow kasoo yeeray Dowlada Britain ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka Somaliland uusan kamid noqon doonin maamulada Somalia ee lagu marti galiyay Shirka May ka furmaya Magaalada London ee xarunta dalka Britain.
Britain waxa ay sheegtay in Somaliland ay ka weecaday dhammaan baaqyadii ay u direen, waxa ayna ku eedeysay inay ku fashilantay dimuqraadiyadda kadib markii maamulka uu noqday mid reero gaara ay heystaan.
Britain ayaa ku dooday in shirkaasi loogu tallo galay in ay ka qeybgasho Dowlada cusub ee Somalia sidaa darteedna Maamulka Somaliland aanu qeyb ka aheyn shirkaas maadaama ay qaban weysay doorashooyinka madaxtinimada oo loo ballan sanaa Bisha April.
Andrew Allen oo ah Danjire ku-xigeenka Britain ee Somalia kuna sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Somaliland ay ka weecatay waxa loogu yeero Dimuquraadiyada.
Waxa uu sheegay in Somaliland aysan u qalmin in wakhtigaani ay ka qeybgasho shirka ka furmaaya London ee looga hadlaayo arrimaha Somalia.
Shirka ayaa magaalada London ka furmi doona 11-ka May waxaana ka qeybgali doona Dowladda Somalia iyo dhowr dal oo reer galbeedka iyo African ah.